DAAWO MUUQAALKA: Neymar oo Kubbad ku jebiyay Diyaarad Drone ah! – Gool FM
DAAWO MUUQAALKA: Neymar oo Kubbad ku jebiyay Diyaarad Drone ah!
Haaruun June 29, 2016
(Rio de Janiero) 30 Juunyo 2016 – Xiddiga kooxda Barcelona iyo xulka Brazil Neymar Junior ayaa sugi kari la’ furitaanka Cayaaraha Olimbikada ee lagu qaban doono dalkiisa inta u dhexeysa 5 ilaa 21 Bisha August, waxaana uu qaadanayaa waqti farxad iyo baashaal ah.
Muuqaal gaaban oo la soo bandhigay ayaa waxaa Neymar Junior kubbad uu laaday ku jebinayaa Diyaarad yar oo Drone ah oo aan duuliye wadin, iyadoo saaxiibadiisna ay u sacbinayaan, islamarkaana leeyihiin ‘Bravo’.
Neymar oo 24 sano jir ah ayaa hoggaamin doona xulka Seleção ee 23-sano jirrada oo ka qayb geli doona cayaaraha Olimbikada Rio, waxaana uu ku jiraa liiska ciyaartoyda xulka Brazil ee uu magacaabay Tababare Rogerio Micale.
Arsenal iyo PSG oo ku loolamaya saxiixa Lacazette
Waa kee laacibka ilaa iminka ugu shidan Tartanka Euro 2016 dhanka xiirashada TINTA!... + SAWIRRO